MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the proposed appointment of H.E. Mr. Nathan WOLF LUSTBADER as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Mexican States to the Republic of the Union of Myanmar
Myanmar has agreed to the proposed appointment of H.E. Mr. Nathan WOLF LUSTBADER as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Mexican States to the Republic of the Union of Myanmar
by adminmofa on 09/02/2017 at 7:50 PM
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the proposed appointment of H.E. Mr. Nathan WOLF LUSTBADER as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Mexican States to the Republic of the Union of Myanmar.
H.E. Mr. Nathan WOLF LUSTBADER finished Postgraduate studies in International Relations from American University, USA and joined the Ministry of Foreign Relations of Mexico in 1992. He served as the Chief of Staff to the Coordinator for Economic Affairs from 1992 to 1994, as the Deputy Chief of Staff to Minister of Foreign Relations from 2001 to 2003 and as the Diplomatic Advisor to the President of Mexico. He also served in Economic Affairs in Embassies of Mexico to the Uruguay in Montevideo from 1994 to 1998 and the United States of America in Washington D.C. from 1998 to 2001. He can speak Spanish, English, Hebrew, French and Portuguese.
H.E. Mr. Nathan WOLF LUSTBADER will be concurrently accredited as Ambassador of the United Mexican States to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Singapore.
Dated: 9th February, 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော မက္ကဆီကိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ နေသန် ဝုဖ် လပ်စ်ဘာဒါ အား ခန့်အပ်ရန် မက္ကဆီကိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအစိုးရမှ အဆိုပြုလာခြင်းကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
မစ္စတာ နေသန် ဝုဖ် လပ်စ်ဘာဒါသည် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့လွန်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ရာထူးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးရာ ဌာန၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတာဝန်ခံအရာရှိအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ် အထိ ဥရုဂွေးနိုင်ငံ၊ မွန်တီဗီဒီယိုမြို့နှင့် ၁၉၉၈ခုနှစ်မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်မြို့တို့တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ မက္ကဆီကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ ဒုတိယဌာနအကြီးအကဲအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ မက္ကဆီကိုသမ္မတ၏ သံတမန်ရေးရာအကြံပေးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မစ္စတာ နေသန် ဝုဖ် လပ်စ်ဘာဒါသည် စပိန်ဘာသာစကား၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား၊ ဟီဘရူး ဘာသာစကား၊ ပြင်သစ်ဘာသာစကားနှင့် ပေါ်တူဂီဘာသာစကားတို့ကို တတ်ကျွမ်းသည်။
မစ္စတာ နေသန် ဝုဖ် လပ်စ်ဘာဒါသည် စင်ကာပူအခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ မက္ကဆီကိုသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်။